Kauai, HI • Fanorana amin'ny vatana sy ny fanorana NuRu
Kaua'i County dia faritany ao amin'ny fanjakan'i Etazonia any Hawai'i. Izy io dia ahitana ny nosy Kaua'i, Niʻihau, Lehua, ary Kaʻula. Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010 dia 67,091 XNUMX ny mponina. Ny seza distrika dia Līhuʻe. Ny zavatra tsara izay miaraka amin'ny RubPage.com dia afaka mahita ny tsara indrindra nuru massages sy manosotra vatana fivoriana na aiza na aiza alehanao.